Accueil > Gazetin'ny nosy > Entana 20 Sambo : Mitaky fitantanana entitra
Entana 20 Sambo : Mitaky fitantanana entitra
Niteraka fanehoan-kevitra sy fomba fijery tamin’ny mpanara-maso ny raharaham-pirenena maro ny ho fiavian’ny entana iankinan’ny filàna andavanandron’ny mponina (PPN) mahatratra 20 sambo nambaran’ny filohampirenena Rajoelina ny alatsinainy teo.
Ny tsy nazava tamin’ny mpitazana dia hoe « entana novidian’ny fanjakana ve sa fanomezana nateraky ny fifampiraharahana tany ivelany tany izy io » ? Raha novidiana, ny vola azo tamin’iny dia iny ve no nividianana azy ? sy ny sisa e !
Ny sahirana maro an’isa aloha dia faly satria manantena izy ireo fa mba hanjifa vary manodidina ny 1000 ariary ny kilao, ny menaka mba 3000 Ariary ny litatra, ny siramamy sy ny manodidina izany amin’ny vidiny mora.
Ny dikan’izany rehetra izany aloha dia ho sahirana ireo mpandraharaha ara-barotra eto izay misahana ny fivarotana ireny vary sy menaka ary siramamy sy ny sisa ireny satria tsy hisy mpividy aloha izany ny entany. Etsy ankilan’izany, mitaky fandaminam-pitantanana hentitra sy matotra izy io mba tsy hitranga indray ny fanararaotana ka ny mpanambola izay afaka hanangona entana no hanjifa ny ampahany betsaka, ary mety tsy ho tratra aoriana amin’izany ireo mpivarotra mbola haninjara, satria misy tombom-barotra azony andrandraina ao.
Fandaminana hentitra amin’ny fitantanana koa ny takiana mba ho tafaveriana ara-dalàna ao anatin’ny kitapom-panjakana ny vidy ivarotana ireo entana ireo, na fanomezana ireo na novidiana tany ivelany tany… mba hahafahana mieritreritra ny ho avy. Ny azo antoka dia tsy maintsy varotra amonoana antoka no ivarotan’ny fanjakana an’izy ireo satria tsy afa-bela amin’ny fidangan’ny vidin’entana eo amin’ny tsena iraisampirenena ny fanjakana ary toraka izany koa ny fiakatry ny saram-pitaterana an-tsambo, ankoatry ny fitotonganan’ny sandan’ny vola malagasy. Izany hoe raha tsy mivarotra faty antoka ny fanjakana dia hifanahatsahana amin’ny vidin’entana efa eny an-tsena amin’izao fotoana ihany ny sandan’izy io ka tsy azo ambara hoe “hanalefahana ny fidangan’ny vidin-javatra amin’izao fotoana”.
Samia àry mandinika.